Cusbooneysiintu waa mid lama huraan u ah Laydhka Shiinaha ee Raadinta Si Loo Casriyeeyo - Shenzhen Dengfeng Power Co., Ltd.
Hoyga > Warka Warshadaha > Cusbooneysiintu waa lama huraan Shuruudaha Laydhka Shiinaha oo Raadinaya Inay Casriyaan
Cusbooneysiintu waa lama huraan Shuruudaha Laydhka Shiinaha oo Raadinaya Inay Casriyaan
Iftiiminta casriyeynta casriyeynta warshadaha waa lama huraan
Delta Pearl River Delta, dhaqaalaha kutlada warshadaha Zhongshan waa mid aad u kala duwan. Sanadkii 2007, waxsoosaarka warshadaha Zhongshan wuxuu xisaabiyay in kabadan wadarta qiimaha waxsoosaarka warshadaha magaalada oo ah 70% kooxo.
Qeybo badan oo warshado ah oo ku yaal Zhongshan ee warshadaha nalalka ayaa ah warshadaha waaweyn ee soojireenka ah, Zhongshan, oo sidoo kale loo yaqaan "Caasimadda Nalalka Shiinaha". Qeybaha ugu badan ee warshadaha nalalka, magaalada guzhen, ganacsiyada maxalliga ah ee nalalka la xiriira in ka badan 5,000 oo shirkadood, oo ay ka shaqeeyaan in ka badan 100,000 oo qof, ayaa gaaraya ilaa 16 bilyan yuan.
Si kastaba ha noqotee, soo saarista laydhka, alaabooyinka laydhka, waagii hore waxay ahaayeen warshado xoog badan, waxyaabaha teknoolojiyadda iyo alaabooyinka qiimaha lagu kordhiyay ma badna, kor u qaadista kutlada warshadaha waa mid deg deg ah. Kuxigeenka xoghayaha guddiga degmada Zhongshan Li Qihong, Duqa magaalada ayaa u sheegay wariyeyaasha: "Zhongshan waa magaalada kaliya ee tijaabada ah ee ay ka kooban tahay kooxaha warshadaha ee gobolka Guangdong. Sida hogaaminta hal-abuurka nalalka ee kor u qaadista kutlada warshadaha aaga 'horudhaca', warshadaha nalalka guzhen waa inay hagaajiyaan saamaynta silsilada, isbahaysiga teknolojiyadda, shirkadaha gobolka, warshadaha taageera xarumaha hal-abuurnimada buuxda, xarumaha qaybinta iyo casriyaynta kale si ay u noqdaan udub dhexaad warshadeed aad u saameyn badan. â
Imaatinka dhibaatada dhaqaale, waxay saameyn ku yeelatay wax badan oo ka mid ah warshadaha guryaha, nalalka guzhen sidoo kale saameyn yar ayey ku yeelatay, waxay dardar gelineysaa casriyeynta iyo hal abuurka, waxayna sare u qaadeysaa tartankooda.
:Waxyaabaha Laydhka Nalalka Si Aad U Gasho Suuqa Japan
:Shenzhen Dengfeng Power Supply Co., Ltd. Guusha soo bandhigida LED Expo Thailand 2019